China Elastic ear band natambatra namorona masinina fiarovan-tsarimihetsika fiaramanidina fanary masinina fanamafisam-peo masinina masinina orinasa sy ny mpanamboatra | Sanying
Ny tsipika famokarana masinina masinina fiaramanidina tadin'ny masom-borona dia misy ny famahanana coil, ny famorosana ary ny faneriterena, ny fantsom-boaloboka orona ary ny saron-tava. Teknolojia fanapahana sarontava. Amin'ny alàlan'ny fampiasana onja ultrasonic, ny fitaovana dia azo amboarina haingana, tapaka na alaina amin'ny onja eo noho eo, izay miorina, mamonjy asa ary mahomby be.
Masinina fiarovan-tenan'ny fiaramanidina elastika elatra dia fitaovana mandeha ho azy, izay masinina fanamboarana sarontava misy lafiny telo misy sosona lamba sivana. Manomboka amin'ny famahanana akora hatramin'ny famaranana vokatra dia andalana fiasa mandeha ho azy. Ny lamba elastika dia ampiasaina ho akora ilaina amin'ny fehikibo, izay ampiarahina ho azy amin'ny vatana.
--- Ny masinina manontolo avy amin'ny famahanana fitaovana fototra, fampidirana tsipika orona, fanamafisana ny sisiny, fanapahana, dia vita ho azy daholo.
--- Fampitahana ultrasonaly tsy tapaka, sosona telo.
--- Volavola modular, fandidiana azo antoka sy tsotra, fikojakojana mety, fanairana fanakatonana mandeha ho azy.
--- Ny masinina manontolo dia mandray rafitra firafitra aliminioma, fitaovana avo lenta, fitaovana azo antoka sy azo itokisana, porofo tsy misy dikany ary mora diovina.
--- Ny masinina dia matevina, kely ny habeny ary tsy mandray toerana.
--- Fanaraha-maso ny programa PLC, fitoniana avo lenta, tahan'ny tsy fahombiazan'ny ambany.
Anaran'ny vokatra masinina fiarovan'ny fiaramanidina tadin'ny elatra
Famaritana fitaovana 3600 * 900 * 1900mm
Modely ho an'ny fitaovana et-200t
Hery miasa famatsiana w 220 V / 50 Hz
Faneren'ny rivotra 0.5-0.6MPa
Fahombiazan'ny famokarana 150-200pcs / min
Herin'ny fitaovana 3kw
Previous: Karazan-kaopy, masinina karazana masira semi-automatique masinina, masinina sarimihetsika semi-mandeha ho azy
Manaraka: Masinina haingam-pandeha haavo haingam-pandeha ho an'ny milina fanoratana
Mpanamboatra sarontava, Kitapo bubble fonosana, Lamba mena, Lamba matevina manohitra ny statika, Masinina saron-tava iray Drag Drag, Masinina saron-tarehy,